आज २०७८ सालको पहिलो खग्रास सूर्यग्रहण : कुन राशिलाई कस्तो असर ? – Khabar 27 Media
June 10, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on आज २०७८ सालको पहिलो खग्रास सूर्यग्रहण : कुन राशिलाई कस्तो असर ?
अंग्रेजी महिना २०२१ र नेपाली महिना २०७८ सालको पहिलो खग्रास सूर्यग्रहण जून १० अर्थात जेठ २७ गते बिहीवार हुँदैछ ।यस पटक सूर्यग्रहण जयेश्थ महिनाको कृष्णपक्षको अमावस्या दिनमा हुनेछ। सूर्यग्रहण दिउँसो १ः४२ मा सुरू भई साँझ ६:४१ मा समाप्त हुन्छ।
वृष – यस राशि चक्रमा सूर्य ग्रहणको कारण वृष राशिले आफ्नो स्वास्थ्यको धेरै ख्याल राख्नु पर्छ। नकारात्मकताबाट बच्नुहोस्। तपाईंको जीवनमा सकारात्मकता बढाउनुहोस्। आउँदै गरेको एक महिनाको लागि कुनै ठूलो निर्णय लिन बेवास्ता गर्नुहोस्। व्यापारसँग सम्बन्धित केहि कामको केहि समयको लागि स्थगित गर्नुहोस्। लामो यात्रा नगर्नुहोस्। यस राशिका व्यक्तिले भाग्यको सहयोग प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले चिन्ता लिनु आवश्यक छैन।
किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन इरानी युवती ? छक्कै पार्ने यस्तो छ ८ रहस्य
January 21, 2021 July 25, 2021 Shyam Lama
June 13, 2021 October 5, 2021 Shyam Lama
October 13, 2021 October 13, 2021 Shyam Lama